Par Taratra sur 20/05/2019
Notontosaina ny faran’ny herinandro teny amin’ny biraon’ny fokontany 67 Ha Avaratra Atsinanana ny fizaran’ny ONG Positive planet fitaovana ho an’ireo komity mpitantana Rafitra Fidiovana sy Fahadiovana (RF2). Misy karazany telo ireo fitaovana nozaraina: fitaovana fiarovana ireo mpanadio tanàna toy ny baoty, aron’akanjo, tampim-bava. Teo koa ny fitaovana ampiasaina amin’ny fanadiovana toy ny borety, angady, ary ireo fitaovana hoentina manatanteraka ny asa fitantanana toy ny penina, « machine à calculer »,… Taorian’ny fizarana fitaovana, nisy ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny ONG sy ny fokontany ary ny RF2. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa Fako Tana tanteraka izao fizarana fitaovana izao hanomezana tantsoroka ireo RF2 amin’ny fanatanterahana ny asa fanadiovana izay ataony.
Ny 8 jona ho avy izao no hanatanterahana ny androm-bavaka maneran-tany izay hetsika iraisam-pinoana iombonan’ny firenena maherin’ny 240 manerana izao tontolo izao. Handray izany ny kianjaben’i Mahamasina amin’ity taona ity ka ankoatry ny fotoam-bavaka dia hisy ny Diabe ho an’i Kristy izay hotanterahina eto Antananarivo. Hizara vaovao momba izany hetsika lehibe fanao isan-taona izany ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy, anio, eny amin’ny foiben-toerany Ampasampito.
Ao amin’ny lemak’Ifanja, faritra Itasy, nihena 50% ny voka-bary niakatra noho ny fiovan’ny toetrandro ka nampihena ny rotsak’orana sy ny fiakaran’ny maripana. Tsy misy tetiandro mazava intsony koa amin’ny fotoam-pambolena ka sahirana ireo tantsaha. Teo aloha, manome 3t isaky ny ha ny voka-bary nampiasa ny fomba nahazatra. Taty aoriana , rehefa nanao ny SRI tafakatra 5t isaky ny ha ny vary nefa noho ny olana amin’ny toetrandro, nidina ny vokatra.
Ho an’ny distrikan’i Morondava kosa kaohin’ny riaka ny sisin-tany manamorona ny ranomasina, ary nanomboka ny taona 2018 tao anatin’ny fotoam-pahavaratra, niakatra be ny haavon’ny ranomasina. Ao anatin’ny alina iray, nandritra ny andro ratsy, betsaka ny fotodrafitrasa rava toy ny efitrano fandraisam-bahiny maromaro niorina teny amoron-dranomasina.